Usayizi waphansi: 25319.343 Sq feet
Awudingi ukusesha ngokuqhubekayo, ngoba lena yiNdlu enhle kakhulu ehambisana nezidingo zakho. Le 233 Square Yards House iyimpahla enhle kakhulu ongayithenga okwamanje. Le ngxenye yeNorth Nazimabad - iBlock H iqinisekisa ukuthi abahlali basondele kukho konke abangakudinga. Sikulethela okungcono kakhulu okufanele ukunikezwe yi-real estate ngokwenza imali efanelekile noma ukuzithengela yona. Ufuna amathuba amahle okutshala imali kusuka ku-Rs 30,500,000? Ungabe usaya phambili ngoba lokhu kuyisinqumo esifanele kuwe. Indawo ephambili yeNorth Nazimabad izophinda futhi iqinisekise ukuthi impahla yakho ethengiswayo izoba nenani elikhulu lemakethe. Unganqikazi ukufuna eminye imininingwane, xhumana nathi.
Xhumana nomkhangisi +92312364xxxx